Wararka - Maxay ku kala duwan yihiin silsiladda leysku xiro iyo kabaalka lever
Ku wareeji Jack
Waa maxay faraqa u dhexeeya silsiladda tuubbada iyo kabaalka lever
Marka hore, kala duwanaanta mabda'a shaqada:
Ku silsilad wareegaya adoo jiidaya silsiladda gacanta iyo jeexjeexa gacanta, adoo riixaya jiirka isku dhaca iyo kursiga jejebiinta mid isla markaana wareegaya. 5ta ilig ee dhaadheer waxay isku wareejinayaan qalabka wax lagu gooyo, 4ka ilig ee gaagaaban iyo qalabka daloolka daloolka. Sidan oo kale, wiishka kor u qaadka ee marshada godka cirifka ayaa wada silsiladda wax qaadista, sidaasna si joogto ah culeyska kor ugu qaadaya.
Wax soo saarku wuxuu qaataa nooca jejebiinta jiirka ee isku dhaca, oo kaligiis jejebin kara culeyskiisa, iyo bawtiga bawlku laalaabmayo shaashadda 'ratchet wheel' ee hoos timaada ficilka guga si loo hubiyo shaqada aaminka ah ee bareega. dayactirka, waxtarka farsamada sare, jiidaya jiido xoogaa yar, culeys fudud oo lagu qaado, astaamaha cabirka yar ee muuqaalka quruxda badan, adkeysi leh, ku haboon warshadaha, miinooyinka, goobaha dhismaha, daaqadaha, docks, bakhaar, iwm oo loo adeegsaday rakibida mashiinka , qaadista alaabada, gaar ahaan furitaanka iyo hawlgal la'aanta korantada, iyo meel ololi kara iyo meel walxaha qarxa ka badan, ayaa door muhiim ah leh.
Fuulo waa iyada oo loo marayo gacan ku haynta bini'aadamka oo leh mabda'a kabaalka si loo helo xariijinta toosan ee u dhiganta culeyska, wareegga ficilka ee jirka culeyska culeyska gudaha dhaqdhaqaaqa, wadida howlaha culeyska. Waxay leedahay faa'iidooyinka qaab dhismeedka is haysta, miisaanka fudud , cabbir yar, fududahay in la qaado, amaan ah oo la isku halleyn karo, cimri dherer adeeg, xoog jiido gacan yar oo ku xiran xarigga siligga iyo wixii la mid ah.
Waxay qaadi kartaa qaadista, hoos u dhigida, hagaajinta iyo howlaha kale.Haddii ay ku qalabeysan yihiin qalab gaar ah, kaliya ma sameyn karto howl galka aan tooska aheyn, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa mid aad ugu habboon in la doorto booska qalliinka ku habboon, ama culeyska yar ee mashiinka ku dhufo awooddeeda rarka, culeyska ugu badan ee xamuulka waxaa isticmaali kara dhowr mashiin iyo qalab isbarbar socda.
Eeg sawirka ASAKA’gourd faahfaahinta hoose.
Labaad. Keebaa badbaadin badan oo shaqaale ah marka la isticmaalayo silsiladda lejiska ama lever?
Naqshadeynta gacan qabashada naqshadeynta ayaa ah inta badan in lala macaamilo boosku waa yar yahay ama ma ahan muuqaal kacsan oo wanaagsan markii la isticmaalo, qalabka guud ee gacanta lagu jiido waxaa loo isticmaalaa sidii xiisad jiif ah, adeegsiga jiifka ah ee foosha, sagxad gacanta lagu jiido waa adeegsiga tooska ah, isticmaalka tooska ah ee foosha .Hist Swanjiste waxaa lagu wadaa ma aha silsilad jiido gacanta, laakiin by dhagaxa.
Mar saddexaad, silsilad dejiye iyo kabaal fuulo kee baa si weyn loo adeegsadaa?
Qalabka kabaalka bilaashka ah ee bilaashka ah, waxaad u jeedinaysaa xargaha birta birta si aad u kala fogaato marka gacmahaaga si aad kor ugu qaaddo culeyska ay u fududaaneyso inaad hoos u dhigto, ama dib u soo laabato iyo hagaajinta qalabka kabaalka hagaajinta iyo masaafada u kala jarista, ku habboon iyo kala goynta degdegga ah | ama kor u qaadid, silsilado kale oo kabaal dhejis ah oo isla isbarbar dhiga mugga kor u qaadaya, Calabashka Gacan-jiidka ayaa aad uga yar kan calalka-jiidaya, waana ka wax-ku-oolsan shaqada gacanta calabash-ka oo leh codsi ballaaran.
Waqtiga boostada: Apr-30-2021
Maxay ku kala duwan yihiin silsiladda ho ...
Waa maxay astaamaha korontada ...
Genius wuxuu isku daraa Shimano Di2 iyo SRAM hy ...
Suuqa winch soo kabashada awooddu waxay arki doontaa ...
Qalabka korontada loo isticmaalo calaamadda madadaalada ...
WAQTIYADA DHISMAHA, JIRKA LIANGZHU, DEGMADA YUHANG, MAGAALADA HANGZHOU, GOBOLKA ZHEJIANG, SHINA
Hada Naga Soo wac: +86 13486165199